‘ज्ञान, सीप र सिकाइभन्दा अंकतिर बढी ध्यान दिइएको छ’ – Chitwan Post
विक्रम संवत् २००८ चैत्र २९ गते ठूलीपोखरी २, पर्वतमा रमाकान्त सापकोटाको जन्म भएको हो । उनको हालको स्थायी ठेगाना भने भरतपुर १०, चितवन हो । सापकोटाले त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट बीए र एमएडसम्मको अध्ययन गरेका छन् । उनी एनपीआई, भरतपुर अस्पताल र आशा अस्पतालका नर्सिङ कार्यक्रम, सदस्य विज्ञ समूह तथा सदस्य नगर समिति र संयोजक ः शैक्षिक योजना निर्माण समिति भरतपुर महानगरपालिका, चितवन, तालिमप्राप्त र न्यायालयमा सूचीकृत मेलमिलापकर्ता, चितवनसँग आबद्ध रहेका छन् । उनका कृतिहरुमा शिक्षाका आयाम (२०७५), शिक्षा मनोविज्ञान बीएड (सहलेखन २०६४), शैक्षिक मामिलासम्बन्धमा १५० भन्दा बढी लेखहरु प्रकाशित भएका छन् ।
रमाकान्त सापकोटा विभिन्न पुरस्कार तथा सम्मानहरुबाट समेत पुरस्कृत र सम्मानित भएका छन्, जसमा जिशिस चितवनबाट प्रशंसापत्र तथा नगद पुरस्कार (२०४९ र २०५१), शिक्षा मन्त्रालयबाट स्वर्ण पदक र प्रशंसापत्र (२०५९), प्रबल गोर्खा दक्षिण बाहु, चौँथो (२०५९), विभिन्न शैक्षिक तथा सामाजिक संघसंस्थाबाट सम्मानपत्र र प्रशंसापत्रलगायतका छन् । शिक्षासेवी रमाकान्त सापकोटा विसं २०२७ देखि शिक्षण सेवामा प्रवेश गरी हालसम्म निरन्तररुपमा प्राध्यापन क्षेत्रमा सक्रिय रहँदै आएका छन् । उनले शिक्षणमा मात्रै नभई समाजमा शैक्षिक जागरण ल्याउन एक अभियन्ताको भूमिका पनि निर्वाह गर्दै आएका छन् । नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठनको महासचिव, एजुकेसन इन्टरनेसनल एसिया प्रशान्त क्षेत्रका बोर्ड मेम्बर, अमेरिकन पिसकोरका प्रशिक्षक, शिक्षा मन्त्रालयका सल्लाहकार र विभिन्न सामाजिक तथा शैक्षिक संघसंस्थाको नेतृत्व तहमा रही शिक्षा एवं सामाजिक क्षेत्रमा उनले सेवा गर्दै आएका छन् । शैक्षिक क्षेत्रमा सेवा गरेबापत् राष्ट्रिय शिक्षा पदक र प्रबल गोर्खा दक्षिण बाहु (चौँथो) बाट उनी विभूषित भइसकेका छन् । प्रस्तुत छ, मनोसामाजिक क्षेत्रका अध्येता तथा शिक्षाविद्को पहिचान बनाएका, शिक्षा क्षेत्रका एक बहुप्रतिभाशाली व्यक्तित्व रमाकान्त सापकोटासँग शिक्षा क्षेत्रसँग सम्बन्धित रहेर गरिएको संवाद :
१) आजभोलिको समयलाई केमा व्यस्त राख्नुुभएको छ ?
– म सधैँ अध्ययन, खोज अनुसन्धान विशेषगरी शिक्षा क्षेत्रसँग सम्बन्धित विषयमा खोज गर्ने तथा सामाजिक र शैक्षिक संस्थाहरुका माग र आवश्यकताहरुका आधारमा सेवा उपलब्ध गराउने एवं शिक्षा सम्बन्धित मुद्दाहरुका बारेमा जानकारी लिने र सम्प्रेषणको काम गरिरहेको हुन्छु ।
२) चितवन जिल्लामा शिक्षाको अवस्था कस्तो देख्नुहुन्छ ?
– रापती दून जमिन वितरण र विकास योजना तथा औलो उन्मूलनपछि चितवनको विकास प्रारम्भ भएको रहेछ । २०११ सालबाट शैक्षिक स्थितिका अभिलेखहरु पाइन्छन् । सर्वप्रथम चितवनमा धर्मपुर भन्ने ठाउँमा एउटा मात्र पाठशाला २०११ सालमा थियो । २०१७ सालसम्म आइपुग्दा २२ ओटा प्रावि, ४२ शिक्षक र २६४ विद्यार्थी रहेका थिए र विसं २०१८ मा चितवन हाईस्कुल स्थापना भएको अभिलेख पाइन्छ । हालसम्म आइपुग्दा चितवनमा ७२० पूर्वप्रावि तथा बाल विकास केन्द्र, ३१९ आधारभूत विद्यालय, २१८ मावि, खुल्ला विद्यालय १, नेपाल सरकार शिक्षा मन्त्रालय र सिटिईभिटीबाट स्वीकृत लिएर प्राविधिक विषय चलाइएका विद्यालयहरु १६ ओटा छन् । दुई दर्जनभन्दा बढी कलेज, १ विश्वविद्यालय, विशेष शिक्षाका कक्षाहरु अर्थात् दृष्टिविहीन बोल्न र सुन्न नसक्नेहरुका लागिसमेत विशेष कक्षा सञ्चालित विद्यालय छन् । सामुदायिक अध्ययन सिकाइ केन्द्र (सिएलसी) ३३ ओटा छन् ।
चितवनमा सामाजिक, शैक्षिक क्षेत्रमा सामुदायिक र संस्थागतरुपमा हेर्ने हो भने झन्डै १३०० भन्दा बढी शैक्षिक संस्थाहरु रहेका छन् । स्वाभाविकरुपले पूर्वप्राविदेखि मावि तहसम्मको शिक्षा क्षेत्र ठूलो छ । चितवन ७ ओटा स्थानीय तह भरतपुर, इच्छाकामना, कालिका, खैरहनी, रत्ननगर, राप्ती र माडीमा विभाजित छ । सामुदायिक विद्यालयहरु माविमा ९८ र संस्थागतमा १२१ छन् । आधारभूत तहमा सामुदायिकमा २६१ र संस्थागतमा ५० छन् । आधारभूत तहमा सामुदायिक र संस्थागतमा गरेर ४५३० र मावि तहमा १४२९ शिक्षकहरु कार्यरत छन् । सामुदायिकमा जम्मा शिक्षक २९०८ र संस्थागतमा ३०५४ छन् भने सामुदायिकमा ८७,६२२ र संस्थागतमा ९३,२२६ विद्यार्थी रहेका छन् । यसले गर्दा चितवनमा शिक्षाको क्षेत्रमा संख्यात्मकरुपमा निकै विकास भएको देखिन्छ । गुणात्मकरुपमा त्यति नै विकास भएको छ भनी सन्तुष्टि लिन सकिँदैन । तर पनि अन्यत्रको भन्दा शैक्षिक गुणस्तरप्रति त्यति निराशाजनक स्थिति पनि छैन ।
भरतपुरमा कक्षागत र विषयगत उपलब्धिमा सन्तोष लिन सकिने स्थिति छैन । महानगरभित्रै सामुदायिक विद्यालयहरुले सेवा पु¥याएका विद्यार्थीभन्दा संस्थागत विद्यालयले सेवा पु¥याएका विद्यार्थीहरुको संख्या बढी छ । अर्थात् सरकार, सरकारको पद्धति उही पाठ्यक्रम हो, उही पढ्न जाने हुन्, उही परीक्षा हो तर सामुदायिकमा नगई संस्थागतमा विद्यार्थी र अभिभावक आकर्षित हुनु भनेको सरकार, सरकारमा बसेका मान्छेहरु, सरकारी लगानी, सरकारी क्षेत्रमा काम गर्ने शिक्षकहरु र सामाजिक क्षेत्रहरुमा काम गर्ने सबैलाई चुनौतीपूर्ण कुरा हो ।
३) दिइएको शिक्षाले विद्यार्थीहरुको सोचमा परिवर्तन ल्याउन नसकिएको सन्दर्भ बेलाबेलामा उठ्छ । यसमा यहाँको विचार कस्तो छ ?
–मैले धेरैपटक भन्दै र लेख्दै आएको छु र अहिले भर्खरै प्रकाशन गरेको ‘शिक्षाका आयाम’ पुस्तकमा पनि भनेको छु । सिकाइ जीवनका लागि कि जाँचका लागि ? हामीले ज्ञान, सीप र सिकाइलाई भन्दा अंकलाई ध्यान दिएका छौँ । एउटा परीक्षा र एकपटक प्राप्त गरेको प्रमाणपत्र त्यो जीवनभर सिकेको प्रमाणपत्र हुनै सक्दैन । विद्यार्थीले सीप, ज्ञान र जीवनका लागि भन्दा पनि जाँचका लागिमात्रै पढेको छ । शिक्षा सामान्य जीवनयापन र समस्या समाधानका लागि पनि भएको छैन । घोक्ने र रट्नेमात्रै काम भएको छ । जीवनमा के चाहिने हो, त्यो पाठ्यक्रम र सिकाउने विधिले पनि सम्बोधन गरेको छैन । अभिभावकको चाहना पनि अंककै खोजीमा छ । त्यसबाहेक, भाषाको खोजीमा छ । अंग्र्रेजी सिकेपछि सबै भइहाल्छ भन्ने छ । भाषाले मात्रै समग्र ज्ञान र सीपको विकास गर्दैन । भाषा भनेको सम्प्रेषणको माध्यममात्रै हो । भाषा नै उसको ज्ञान, सीप र दक्षताको सूचक बन्न सक्दैन । हाम्रो अंगे्रजी शिक्षाको मोहले गर्दा यहाँ जिउन सक्ने गरी तयार भएनन्, अर्थात् जीवनका लागि तयार भएनन् भन्ने ठानेको छु ।
४) शिक्षाको विकास र गुणस्तर सुधारका लागि चितवनमा कस्ता कार्यक्रम र योजनाहरु ल्याउन आवश्यक देख्नुहुन्छ ?
– हामी संघीयताको अभ्यासमा गइसकेका छौँ । संविधानले नै अनुसूची बनाएर स्थानीय तहको अधिकार तोकेको छ । चितवनका सबै तहमा योजना एउटै हुनै सक्दैन । सात ओटा स्थानीय तहको बेग्लाबेग्लै नीति र योजना हुन सक्दछन् । राष्ट्रिय शिक्षा नीति एउटा हुन्छ । प्रदेशको शिक्षा नीति एउटा हुन्छ । स्थानीय तहको शिक्षा नीति एउटा हुन्छ । ती एकअर्कोमा नबाझिने गरी बन्छन् र शिक्षाको मूल उद्देश्य राष्ट्रिय उद्देश्यसँग मेल खाने गरी प्रदेशको उद्देश्य हुन्छ । सोहीअनुसार मेल खाने गरी स्थानीय तहको उद्देश्य हुन्छ । त्यहीअनुसार नीति पनि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको हुन्छ । योजना, दृष्टिकोण र कार्यक्रमहरु पनि सोहीअनुसार जान्छन् ।
चितवनभरि एउटै योजना, नीति, कार्यक्रम र दृष्टिकोणले सम्बोधन गर्ने भन्ने कुरा अब पुरानो भयो । सबै स्थानीय तहले आप्mनै कार्यक्रम, ऐन, नीति–नियम र प्रशासकीय तरिका बनाउँछन् । यो हिसाबले देशमा शिक्षा ऐन ७६१ ओटा बन्न सक्छन् । ७५३ स्थानीय तहका, ७ प्रदेशका र १ संघीय गरेर ७६१ ओटा शिक्षा ऐन हुन सक्छन् । त्यसैगरी, ७६१ नियमावली हुन सक्छन् । स्थानीय आवश्यकता र विशेषताका आधारमा बेग्लाबेग्लै कार्यक्रम हुन सक्छन् । राष्ट्रिय पाठ्यक्रम, राष्ट्रिय नीति र उद्देश्यहरु भने सबैले आप्mनो योजनामा समावेश गर्नुपर्दछ ।
५) शिक्षाको गुणस्तरमा सुधार ल्याउन कस्ता प्रयासहरु भइरहेका छन् ?
– राजनीतिक परिवर्तन भइसकेपछि देशैभरिबाट सुझाव संकलन गरेर सरकारलाई रायसुझाव दिन राष्ट्रिय शिक्षा आयोगहरु गठन हुने गर्दछन् । विसं २००७ सालको परिवर्तनलाई सम्बोधन गर्न आयोग गठन भयो र २०११ मा प्रतिवेदन बुझायो । २०१७ सालमा राजनीतिक परिवर्तन भयो । राजनीतिक व्यवस्थालाई सम्बोधन गर्न २०१८ सालमा शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन आयो । २०२८ मा राष्ट्रिय शिक्षा पद्धतिको योजना लागू भयो, सोहीअनुसार योजना, नियम, ऐन र पद्धतिको विकास भयो । यही नै देशको शिक्षा विकासमा कोशेढुंगा सावित भएर आयो । यसअघि शिक्षा सञ्चालन गर्ने जिम्मा सरकारको थिएन । २०२८ पछि शिक्षा पूरै सरकारको भयो । शिक्षक र विद्यालय सबै सरकारी भए । विद्यालय भनेका सामाजिक संघसंस्था भनेका जस्ता थिए । शिक्षण पेसा बनेकै थिएन । सामाजिक सेवामात्र थियो ।
२०४६ मा राजनीतिक परिवर्तन भयो । २०४९ मा शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन आयो । फेरि २०४८ को प्रतिवेदन अपूरो भयो भनी २०५५ मा शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन आयो । २०५८ मा शिक्षा आयोगको गठन भयो । शिक्षालाई निःशुल्क गर्ने राजनीतिक दलले निर्णय गरे, तर दूरगामी दृष्टिकोणका साथ योजना आएन ।
२०५८ मा नै फेरि आयोग गठन भयो । त्यसपछि लागतका आधारमा शुल्क लिने सरकारले सक्दो सहयोग दिने भनेपछि राहत शिक्षक लिने, आर्थिक अनुदान दिने, अभिभावकले आफूखुसी न्यूनतम सहयोग दिने र भौतिक साधन जुटाउन पाउने गरी आयोगको प्रतिवेदन आयो । सरकारले ऐन नियम बनाउनुपर्छ, तर यी सुझाव त्यसमा लागू भयो भने अहिले भइराखेका प्रयत्न राम्रो हुन्छ । विज्ञहरुले पनि ४÷५ महिना लगाएर सुझाव दिएका छन् । विद्यालयमा शिक्षक मिलाउन दरबन्दी मिलान समिति गठन भयो, त्यसमा म पनि थिएँ । योग्यताअनुसार तहगतरुपले शिक्षकहरुको व्यवस्था भएको अवस्था छैन । यो मिलाउने गरी ऐन नियम आउने गरी संघीय र प्रादेशिकरुपमा ऐन नियम आउने प्रयत्न भएको छ भन्ने सुनेको छु । बाहिर देखिने गरी शिक्षामा त्यस्तो केही नभएको अवस्था भएकोले शिक्षा संक्रमणकालमा छ । शिक्षा क्षेत्रमा रहेका कर्मचारी र शिक्षकहरुले संक्रमणकालको अनुभूति गरेको पाएको छु । तिनीहरुमा अन्योल र काम गर्ने उत्प्रेरणामा कमी आएको पाएको छु ।
६) विद्यालयमा शिक्षण सिकाइलाई प्रभावकारी बनाउन शिक्षकलाई दिइएका सहजीकरणका तालिमहरुले सामुदायिक विद्यालयमा शिक्षाको स्तर बढेको देख्न सकिन्छ ?
– त्यसमा तीन ओटा पक्ष छन्, एउटा शिक्षकको ईमान्दारिता र लगनशीलता, अर्को सहजीकरण गर्ने सीप अनि तालिम दिने सहजीकरण गर्ने निकाय । तालिम लिने उत्प्रेरित छैनन् भने लागू गर्ने अवस्थामा झन् ठूलो समस्या छ । ठूलो प्रतिस्पर्धा गरेर राम्रा मान्छेमात्रै यो क्षेत्रमा आएका छन् भन्ने छैन । यही क्षेत्रमा इमानदार र लगनशील भएर यसमा नै नाम र दाम कमाउँछु भन्ने शिक्षकले प्रतिफल राम्रो दिन सक्छ । योग्य शिक्षक भएर पनि मेहनतसाथ सिकाउने काम भएन र पढाइमात्रै भयो भने शिक्षामा सुधार हुँदैन । विद्यार्थीले पढेर सिकेन भने त्यो पढाइमात्रै भयो । प्रमुख कुरा शिक्षकले कति सिकाउन र सहजीकरण गर्न सक्छ, त्यो मह¤वपूर्ण हुन्छ । पढाउनु र सिकाउनु बेग्लै कुरा हुन् । अहिलेसम्म पढाउने काम धेरै भएको छ, तर सिकाउने काम कम भएको छ । काम गरेरमात्रै सिकिन्छ । काम गर्न सुरू गरेपछि वास्तविक पढाइ सुरू हुन्छ ।
सबै विद्यार्थीको रूचि र क्षमता उस्तै हुनै सक्दैन । शिक्षा बालकेन्द्रित हुन्छ, शिक्षाकेन्द्रित हुँदैन । राम्रो शिक्षक छ भने रुखमुनि गएर पनि सिकाउन सक्छ । मह¤वपूर्ण कुरा पाइलट राम्रो हुनुपर्दछ । पढाइ एउटा लाइसेन्समात्रै हो, लाइसेन्सले मात्रै गाडी चल्दैन । सर्टिफिकेटले कक्षा चल्दैन, कक्षा सुझबुझ, विवेक, इमानदारिता र निष्ठाले चल्छ । यही पेसालाई गर्व गर्ने मान्छे शिक्षामा बस्ने हो भने शिक्षण राम्रो हुन्छ । शिक्षा बनाउने चीज हो । सिकाइ अनुभव र तालिमबाट प्राप्त हुन्छ । ज्ञान तथ्यांक हो । तथ्यांकमा विवेक र अनुभव मिलाएर शिक्षा बन्छ । क्षमता र अनुभव मिलाएपछि बुद्धि बन्छ । शिक्षा, ज्ञान, अनुभव, विवेक, समस्या समाधान गर्ने क्षमता हो । सूचनामात्रै होइन, शिक्षा हुनका लागि अन्यत्र प्रयोग भएको हुनुपर्दछ । शिक्षाले मान्छेलाई प्रेरणा, खुसी, सन्तुष्टि, समायोजित र गुणस्तरीय जीवन दिनुपर्दछ । त्यस्तो शिक्षा प्रमाणपत्रबाट मात्रै आउँदैन । शिक्षाभित्र ज्ञान, अनुभव, विवेक, परिस्थितिको विश्लेषण, समालोचना गर्ने क्षमता र सचेतनाको मिश्रण हुन्छ । शिक्षा समग्र हो ।
७) प्रशिक्षणका दौरानमा सहभागीले सोधेका प्रश्नबाट आक्रोशित भई विद्यार्थी र सहभागीलाई कक्षाकोठा वा प्रशिक्षण हलबाट बाहिर निकाल्ने शिक्षक र प्रशिक्षकहरुलाई यहाँ के सन्देश दिन चाहनुहुन्छ ?
– एउटा शिक्षकको अनुभूति अरुका लागि सन्देश हो । विद्यार्थीले जे जानेको छ त्यहीँबाट सिकाइ सुरू गर्नुपर्दछ । विद्यार्थीले जे जानेका छन् र उनीहरुसँग जे अनुभव छ त्यही बिन्दुबाट सिकाइ सुरू हुन्छ । अर्थात् विद्यार्थीको रूचि र आवश्यकता अनि विद्यार्थीले जे विषयमा प्रश्न गर्छन्, शिक्षण र सिकाइको सुरूवात त्यही बिन्दु हो । धेरै जान्ने तर सहजीकरण सीप नभएको शिक्षकभन्दा जान्न थोरै जाने पनि सीप र भावना भएको शिक्षक धेरै उपयोगी हुन्छ । बालमनोविज्ञान बुझ्न सक्ने, अरुलाई सुन्न र देख्न सक्ने हुनुपर्दछ । शिक्षण पेसा कलाकारिता हो । शिक्षण पेसामा कलात्मकता, सिर्जनात्मकता र जाँगर हुनुपर्दछ ।
८) शिक्षण सिकाइ विद्यार्थीमा प्रभावकारी भए/नभएको बारेमा अनुगमन, नियमन गरिने अवस्था चितवनको हकमा कस्तो देख्नुहुन्छ ?
– यो मूल्यांकनको पाटो हो । परीक्षा र मूल्यांकन फरक कुरा हुन् । परीक्षा मात्रात्मक हुन्छ भने मूल्यांकन गुणात्मकसमेत हुन्छ । चितवनको हकमा मात्रात्मक र गुणात्मकरुपले सन्तुष्ट त हुन सकिँदैन । किनभने, आधारभूत तहका विद्यार्थीमा सिकाइ उपलब्धि सालाखाला ५५÷६० प्रतिशत नाघेको छैन । मात्रात्मक सिकाइबाट पनि सन्तुष्टि लिन सकिँदैन । सिकाइ उपलब्धिलाई बढाएर ७५ भन्दा बढी पु¥याउने दायित्व शिक्षण पेसा र जिम्मेवारीमा रहेका हामी सबैमा छ । परीक्षामा राम्रो अंक प्राप्त गरेका मान्छेहरुको पनि सिकाइपछिको श्रम बजारमा बिक्न सक्ने अवसर, श्रममा गएर पनि राम्रो परिणाम देखाउन सक्ने क्षमता विकास भएन भने मूल्यांकनको पाटो कमजोर हुन्छ । चितवनमा पनि पढेका धेरै छन्, तर सामाजिक र वित्तीय क्षेत्रमा चाहिएजति आवश्यक जनशक्ति उत्पादन भएको छैन । परीक्षा पास गरेका धेरै छन्, तर मूल्यांकनमा खरो उत्रेका जनशक्तिको संख्या कम छ ।
९) अहिले हामीले दिइरहेको शिक्षा समाज विकास र राष्ट्र समृद्धिमा टेवा दिन सक्षम छ ?
– काम गर्ने अवसर पायो र वातावरण भयो भने काममा गएर पनि मानिसले सिक्न सक्छ । मान्छेमा क्षमता अभूतपूर्व हुन्छ । संसारमा २ प्रतिशतजति मान्छेहरु अत्यन्तै विलक्षण प्रतिभा भएका हुन्छन् । सालाखाला उस्तैउस्ता ६० प्रतिशत मान्छेहरु हुन्छन् । १५÷१६ प्रतिशत औसतभन्दा माथिल्ला हुन्छन् । केही प्रतिशत मान्छे औसतभन्दा तलका हुन्छन्, जसलाई सिक्न कठिन र समायोजन गर्न केही कठिन हुन्छ । उनीहरु अरुको सामान्य सहयोगमा जसोतसो जीवनयापन गर्न सक्छन् । केही न केही क्षमता सबैमा हुन्छ, तर बराबर क्षमता सबैमा हुँदैन । सबैमा रूचि, क्षमता र दृष्टिकोण बेग्लाबेग्लै हुन्छ । त्यसमा अवसर र वातावरणले प्रभाव पार्दछन् । मल र पानीमात्रै भएर हुँदैन, बीउ पनि राम्रो हुनुपर्दछ । बीउ र वातावरण दुवै राम्रो हुनुपर्दछ । आप्mनो खुट्टामा उभिन सक्ने गुण र क्षमता धेरैमा हुन्छ । तपाईं परिवार, समाज र देशलाई बोझ बन्नुभएन भने त्यो विकासको लक्षण हो । समृद्धि सरकारले मात्रै ल्याइदिने होइन, सरकारले काम गर्ने वातावरण बनाइदिने हो । सरकारले अवसर दिने, पद्धति, कानुन र नियम बनाइदिने हो । विधिले शासन चलाउने हो । समृद्धि जनताले आफूले गरेको श्रम र इमान्दार प्रयत्नभित्र खोज्ने हो । त्यो श्रम र बुद्धिमा हुन्छ । शिक्षाले क्षमता र बुद्धि दिने हो भने अवसर र रोजगारी बजार त अर्थतन्त्रले दिने हो ।
१०) शिक्षाको गुणस्तर सुधारमा कस्ता चुनौतीहरु सामुन्नेमा रहेका छन् ?
– क) लगानीको चुनौती (पुँजी, स्रोतसाधन र जनशक्तिको लगानी) ।
ख) राम्रो जनशक्तिलाई शिक्षामा भिœयाउने र टिकाउने चुनौती छ । राम्रो मान्छे शिक्षामा आउनै नचाहने स्थिति पनि छ ।
ग) सामुदायिक विद्यालयले विश्वास आर्जन गर्ने चुनौती ।
घ) सरकारी नियमनकारी निकाय कमजोर भएको छ ।
ङ) राम्रो गर्नेलाई प्रेरणा, सम्मान र प्रशंसा गर्ने बानी बस्नै सकेन ।
च) नराम्रा र गलत कार्य गर्नेलाई कारबाही गर्नै नसकिने स्थिति छ ।
११) चितवनमा शिक्षालाई अझ व्यवस्थित र सुधार गर्न कस्ता शैक्षिक संस्था खडा गर्नु आवश्यक छ ?
– सबैभन्दा पहिले भएका सबै शैक्षिक संस्थालाई पुनः नक्सांकन गर्दै जानु आवश्यक छ । अनावश्यक भएका विद्यालय जहाँ विद्यार्थीको संख्या कम र भौतिक साधन कम भएकालाई एकअर्कोमा गाभ्नुपर्दछ । दोस्रो कुरा, विद्यालयहरुको सेवा क्षेत्र पहिचान गर्नुपर्दछ । तेस्रो कुरा, विद्यार्थीहरुलाई अनावश्यकरुपमा पाठ्यसामग्रीका ठूला भारी बोकाउन बन्द गर्नुपर्दछ । विद्यालयमा पाठ्यक्रम पढाउने हो, पुस्तक विद्यार्थीले घरमा नै अध्ययन गर्दछ । कक्षा नियमन र सुपरभिजन गर्ने चलन छैन । अब सबै कक्षाकोठा र शिक्षकहरु प्रविधिमैत्री, सबल र व्यवस्थित हुनुपर्दछ । हरेक विद्यालयमा न्यूनतम एउटा पुस्तकालय र प्रयोगशाला अनिवार्य हुनुपर्दछ । अब संघीय र स्थानीय सरकारले सार्वजनिक जग्गा उपलब्ध गराएर वा किनेर भए पनि न्यूनतम एउटा बाल उद्यान पार्क बनाउनुपर्छ । लाइसेन्स सिस्टमलाई नवीकरण गर्नुपर्दछ । शिक्षक लाइसेन्स पुनः अपडेट पनि गर्नुपर्छ । एकपटक प्राप्त गरेको ज्ञान र सीपले सधैँलाई पुग्दैन ।
१२) शैक्षिक सुधारका लागि विद्यालयहरुले कस्ता गुरूयोजना बनाई काम गर्नु आवश्यक छ ?
– योजना भनेको स्रोत, साधन, समयको व्यवस्थापन र प्राथमिकता निर्धारण गर्ने हो । अबको ५/१० वर्षमा शिक्षा कहाँ पुग्छ भनेर बनाउने दृष्टिकोण गुरूयोजना हो । ५ वर्षका लागि चितवनका हरेक विद्यालयले योजना बनाउने हो भने मेरो विद्यालयका सेवा क्षेत्रमा कोही विद्यार्थी निरक्षर हुने छैनन् भनी अनौपचारिक शिक्षा चलाउन सक्छन् । दीर्घकालीन योजनामा आधारभूत शिक्षा सुनिश्चित गर्नुपर्दछ । ८ कक्षासम्मको आधारभूत र अनिवार्य निःशुल्क शिक्षामा सबै सफल हुनुपर्दछ । असफल भएमा अतिरिक्त कक्षा गराएर पुनः सिकाइ गरेर उत्तीर्ण हुने व्यवस्था सुनिश्चित गर्नुपर्दछ । आजको पाठ्यक्रम ५ वर्षपछिलाई पुग्दैन । राष्ट्रिय, प्रादेशिक समय सान्दर्भिक हुने गरी र स्थानीय ज्ञान, सीप दिने गरी पाठ्यक्रमको व्यवस्था गर्नुपर्दछ । आयोगको प्रतिवेदनले अपेक्षा गरेअनुसार ५ वर्षभित्रमा हामीसँग मावि तहमा स्नातकोत्तर तह पास गरेका शिक्षक हुनेछन् । आधारभूत तहमा न्यूनतम स्नातक शिक्षा पूरा गरेका शिक्षक हुनेछन् । कम्तीमा ३ कक्षासम्म निरन्तर मूल्यांकन, ५ कक्षासम्म ग्रेड टिचिङ पद्धति लागू हुनेछ । ग्रेड टिचिङ भनेको ५ कक्षासम्म जुन विषयमा पनि पढाउन सक्ने शिक्षक हुनुपर्दछ । निरन्तर मूल्यांकन प्रणाली, ग्रेड टिचिङ र विषयगत टिचिङ बेग्लाबेग्लै विधि हुन् । माथिल्लो निकायमा विषयगत शिक्षण गर्नुपर्दछ । शिशु कक्षामा पढाउने शिक्षक पनि राम्रा, तालिमप्राप्त र योग्य हुनेछन् । यी कुराहरु हेरेर गुरूयोजना बनाउनुपर्दछ । यी कुरा सम्बोधन गर्ने गरी दीर्घकालीन योजना बनाउनुपर्दछ ।
१३) शैक्षिक अवस्थामा सुधार गर्न कस्ता नवीनतम प्रयोगहरु भएको देखिन्छ ?
– क) हरेक विद्यालयमा इन्टरनेटसहित सूचना प्रविधिलाई जोड्न थालिएको छ ।
ख) स्थानीय पाठ्यक्रमका नमुनाहरु बन्न थालेका छन् ।
ग) अर्को वर्षदेखि लागू हुने गरि कोर्षमा परिवर्तन हुन थालेको छ ।
घ) राष्ट्रिय शिक्षा आयोगले समग्र पक्षलाई समेट्ने गरी प्रतिवेदन दिएको छ ।
ङ) साधारण शिक्षा र प्राविधिक शिक्षाको अनुपातमा प्राविधिक शिक्षालयहरु कम से कम प्रत्येक स्थानीय तहमा खोल्ने नीतिअनुरुप सरकारका प्रतिबद्धता सुनिएका छन् । क्रमशः साधारण र प्राविधिक शिक्षाको अनुपात ३०/७० बनाउने घोषणा भएको देखिन्छ । घोषणा योजना, ऐन र नियममा आएका छैनन्, यिनीहरु सबै दृष्टिकोणका रुपमा छन् । यी कार्यान्वयन भएमा केही नयाँ कदमहरु हुन सक्छन् ।
घातक नबनोस् एघार बुँदे सहमति